सरकारले अग्रज नेताहरुको अपमान गर्यो : सांसद भुसाल
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का राष्ट्रियसभा सदस्य वेदुराम भुसालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन सन्तुलित नभएको र देश निर्माणमा योगदान पु¥याउने नेताहरुलाई अपमान गरेको बताएका छन् ।
दिनेशले ल्याए नयाँ नेपाल
दिनेश गुरुङले नयाँ नेपाल गीत सार्वजनिक गरेका छन् ।
द्वाइलेटमा लडेँ, संसद जान सकिन, ममाथि शंका गर्नुपर्ने ? : हरिबोल गजुरेल (भिडियो)
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य तथा सांसद हरिबोल गजुरेल संसदको हिजोको बैठकमा अनुपस्थित भएपछि सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टिकाटिप्पणी भए ।
प्रहरीको सफलता : यसरी पत्ता लगाए काठमाडौंमै बमैबमको थुप्रो (भिडियो)
ललितपुर प्रहरी नेत्रविक्रम चन्द समूहले काठमाडौं उपत्यकामा विष्फोटक पदार्थ बनाउने कोठामै छापा मारेको छ ।
अब भूमि फिर्ताका लागि भारतसँग वार्ता हुन्छः प्रधानमन्त्री (भिडियो)
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको नयाँ नक्शासहित समावेश गरिएको संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएसँगै अब छिमेकी मुलुक भारतसँग मिचिएको भूमि फिर्ताका लागि वार्ता हुने बताएका छन् ।
रुकुम घटनाका दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्छ : प्रचण्ड (भिडियोसहित)
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले रुकुम घटनाका दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । घटनाको छानबिनका लागि संघीय संसदले गठन गरेको सांसद देवेन्द्र पौडेल नेतृत्वको समितिसँगको छलफलमा प्रचण्डले सत्यतथ्य पत्ता लगाएर हदैसम्मको कारबाहीको सिफारिस गर्न समितिलाई आग्रह गरे ।
सरिता गिरीको चेतावनी : 'या त मैले आत्महत्या गर्नुपर्छ वा जंगको मैदानमा जानुपर्छ, म फाइट गर्छु' (भिडियोसहित)
समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले नेपालले बंगलादेश र बोस्नियाहर्ज गोभिनाको परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएकी छन् । भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमिसहित जारी गरिएको नयाँ नक्सालाई संविधानमा अध्यावधिक गर्न संविधान संशोधन विधेयकमा असहमति जनाएर गिरीले शनिबारको प्रतिनिधिसभा बैठक बहिष्कार गरेकी थिइन् ।
कोरोना उपचारमा भएकाे खर्चको हिसाब सरकारले छिट्टै सार्वजनिक गर्ने
काठमाडौं । कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समिति (सीसीएमसी) निर्देशक समितिले कोरोना उपचारमा सरकारले गरेको खर्चको हिसाब छिट्टै सार्वजनिक हुने बताएको छ । सीसीएमसीको शुक्रबार साँझ बसेको बैठकले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भएको खर्चको फाँटवारी छिट्टै सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो ।
पिसिआर परीक्षणको माग गर्दै वसन्तपुरमा प्रदर्शन
पिसिआर परीक्षणको माग गर्दै युवाहरुले शुक्रबार वसन्तपुरमा प्रदर्शन गरेका छन् ।
वाटर पार्कमा माछालाई दाना खुवाउँदै चिम्पान्जी, भिडियो भयो भाइरल (भिडियोसहित)
कहिले काहीँ सामाजिक सञ्जालमा आएका तस्बिर र फोटोले मानिसको मन खुसी गरिदिन्छ । अहिले यस्तै एउटा भिडियो भाइरल बनेको छ । भिडियोमा चिम्पान्जीले माछालाई दाना खुवाएको देख्न सकिन्छ ।
१० अर्बको हिसाब माग्दै बालुवाटारमा प्रदर्शन (भिडियोसहित)
बालुवाटारमा सरकारविद्धरु प्रदर्शन भएको छ । सरकारले गरेको खर्च पारदर्शी हुनुपर्ने, पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने माग राख्दै प्रदर्शन भएको हो ।
जन्मिएको २० मिनेटमै नाच्न थाल्यो हात्तीको बच्चा : भिडियो भयो भाइरल (भिडियोसहित)
सामाजिक सञ्जालमा अहिले एउटा भिडियो धेरै नै भाइरल बनेको छ । भिडियोमा एक हात्तीको बच्चा जन्मिएको २० मिनेटमै नाच्न थालेको देख्न सकिन्छ ।
लकडाउनले फलफूल र जुस व्यवसायी मर्कामा
सिन्धुली भन्ने बित्तिकै मानिसहरु नागबेली बाटो र जुनार झट्ट सम्झिहाल्छन् ।
अछाममा अस्पतालको जागिरबाट निकालिएका कर्मचारीले गरे आत्मदाह : उपचारका क्रममा मृत्यु ! (भिडियोसहित)
अछाममा अस्पतालले जागिरबाट निकालेपछि एक कर्मचारीले आत्मदाह गरेका छन् । आत्मदाहको प्रयास गर्दा गम्भीर अवस्थामा पुगेका बयालपाटा अस्पतालका कर्मचारी सिद्धार्थ आउजीको मृत्यु भएको छ ।
भारत-चीन सीमा क्षेत्रमा चीनको शक्ति प्रदर्शन : हजारौँ सैनिक, ट्याङ्क र हवाइ गस्ती (तस्बिर/भिडियो)
भारत र चीनबीच सीमा विवाद समाधानको प्रयास भइरहेको समयमा चीनले सीमा क्षेत्रमा हजारौँ सैनिक, ट्याङ्क र बख्तरबन्द गाडीको लाइन वास्तविक सीमा रेखा (एलएसी) नजिक जम्मा गरेको छ । चीनले छोटो समयमा ठूलो मात्रामा सेना परिचालन गरेर भारतलाई जुन सुकै समयमा पनि आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्न सक्ने संकेत गरेको छ ।
अछाममा जागिरबाट हटाइएपछि अस्पतालका कर्मचारीले गरे आत्मदाहको प्रयास (भिडियोसहित)
अछामको बयालपाटा अस्पतालका एक कर्मचारीले जागिरबाट हटाइएपछि अस्पताल परिसरमै आत्मदाहको प्रयास गरेका छन् ।
टाइप गरेको अक्षरमा टिपेक्स लाग्दा यसरी भयो बाबुरामको बरियता अध्यक्षबाट बरिष्ठ नेता
समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल मिलेर बनेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ ।
सिता र साङ्पोको ‘पैसा नै सब हो नभन’ सार्वजनिक (भिडियो)
गायिका सिता सेपाल्चु साम्पाङ् र गायक साङ्पो लामाको सुमधुर स्वरमा नयाँ गीत ‘पैसा नै सब हो नभन’ को लिरिकल भिडियो सार्बजनिक भएको छ ।
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत गीतकार रहेको गीति एल्बम ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को विमोचन गरिएको छ । मध्यपुरथिमि नगरपालिका–४ कमेरोटारको खुला ठाउँमा आज दुई सडक मानव सानुकान्छा तामाङ र मुगा कार्कीले उक्त गीति एल्बमको विमोचन गरेका छन् ।
उद्योग व्यवसाय सञ्चालनबारे समितिमा छलफल सुरु (हेर्नुहाेस् भिडियाे)
काठमाडौं । कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने सम्बन्धमा तयार भएको मस्यौदा माथि छलफल सुरु गरेको छ । समितिको शनिबार बसेको बैठकमा आर्थिक क्रियाकलापलाई क्रमश सुचारु गर्ने सम्बन्धमा तयार भएको मस्यौदामाथि छलफल भएको हो ।
डा. डीआर उपाध्यायको गीत ‘घर यस्तो होस्’ सार्वजनिक भएको छ ।
भारतीय चेली यत्तिकै आएकी होइन, नेपालको कानुनअनुसार आएकी हुँ : सांसद सरिता गिरी (भिडियोसहित)
समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले मधेशी जनताको हातखुट्टा बाँधेर संविधान निर्माण गरेको बताएकी छन् ।
लकडाउनको उल्लंघन गर्दै खुल्यो काठमाडौंको न्युरोड (फोटो/भिडियो)
लकडाउनको ७३औँ दिन access_time3 months ago
सरकारले लकडाउनको मोडालिटीमा निर्णय नलिए पनि काठमाडौंको न्युरोडका व्यवसायीले आजदेखि लकडाउनको उल्लंघन गर्दै पसल सञ्चालन गरेका छन् ।
क्रिकेटर अश्विनले सेयर गरे क्रिकेटको फन्नी भिडियो : हेरेपछि हाँसो रोक्न सक्नुहुन्न ! (भिडियोसहित)
कोरोना भाइरसको महामारी अन्तरगत जारी लकडाउनमा क्रिकेटरहरु नियमित अभ्यासमा छैनन् । उनीहरुले लामो समयदेखि खेल्न पाएका छैनन् । क्रिकेटरहरु सामाजिक सञ्जालमा केन्द्रित भएका छन् । भारतका चर्चित स्पिनर रविचन्द्रन अश्विनले सामाजिक सञ्जालमा एउटा फन्नी भिडियो सार्वजनिक गरेका छन् ।
नेपालले नक्सा जारी गर्नुमा कसै न कसैको हात छ : भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह (भिडियोसहित)
भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालले हालै जारी गरेको देशको नयाँ नक्साकापछि अरु कसैको हात रहेको बताएका छन् । भारतीय टेलिभिजन जी न्युजलाई दिएको अन्तरवार्ताका क्रममा उनले नेपालले नक्सा जारी गर्नुको पछि कसै न कसैको हात रहेको बताए ।
मच्छिन्द्रनाथमा दीप प्रज्वलन
विश्व शान्तिको कामना गर्दै ललितपुरस्थित मच्छिन्द्रनाथको मन्दिरमा दीप प्रज्वलन गरिएको छ ।
अक्सिजन र भेन्टिलेटर आवश्यक पर्नेलाई मात्र अस्पतालमा उपचार : मन्त्री ढकाल (भिडियो)
स्वास्थ्य तथा जनसङख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या दुई हजार नाघेकाले अब अक्सिजन र भेन्टिलेटर आवश्यक पर्नेलाई मात्र अस्पतालमा भर्ना गरिने बताएका छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पशुपतिनाथको आशिर्वाद लिएर सच्चिन आग्रह गरेका छन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटमा गरेको निजी विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन सुधार गर्ने व्यवस्थामा आम नागरिकले चासो प्रकट गरेका छन् । त्यस्तै असार १ गतेदेखि वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन गर्ने निर्णयका विषयमा पनि विभिन्न प्रकारका प्रश्नहरु उठेका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले बजेटमा भएको व्यवथा र वैकल्पिक पठनपाठनका विषयमा प्रष्ट पारेका छन् ।
विभिन्न जिल्लामा थप २ सय २६ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण फेला परेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विभिन्न जिल्लामा थप २ सय २६ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण फेला परेको जनाएको छ ।
रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारवाही गर्न माग गर्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरिएको छ ।
सिन्धुलीका प्रमुख प्रतिपक्ष दलहरुले राहत वितरणमा अनियमितता भएको भन्दै प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
बाँकेमा भएको गाडी दुर्घटनामा यसरी गर्यो सशस्त्र प्रहरीले उद्दार (फोटो/भिडियो)
बाँकेको सम्शेरगञ्ज नजिक गएराती भएको गाडी दुर्घटनामा १२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । भारतबाट फर्किएका व्यक्ति बोकेको फोर्स गाडी गएराती १२१५ बजे जंगलमा रोकिराखेको गाडीमा ठोक्किएको थियो ।
सिन्धुली सदरमुकाम सडककै दुर्दशा : वर्षा लाग्यो, ग्वाङखोलाले बाटो बगायो
नगरका गाउँ–गाउँमा बाटो सुबिधा पुर्याउने भनेको धेरै भयो । तर स्पष्ट योजना नबनाइ जताततै सडक खनिएकाले सुविधा भन्दा पनि वर्षामा धेरै स्थानीयले सास्ती ब्यहोर्नु परेको छ ।
छुवाछुत र जातीय विभेदलाई हाम्रो संविधानले डण्डनीय अपराध मानेको छ । कानुनका ठेली लेखेर मात्र यस्ता कुचलनहरु हट्ने छैनन्, लेखिएका ती कुराहरुलाई प्रभावकारी प्रकारले हामीले कार्यान्वयन गर्दै जानु पर्दछ । प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै सचेतजनले दवावमुलक आवाज उठाउनुपर्ने भएको छ ।
विभिन्न जिल्लामा पछिल्लो २४ घन्टामा थप १८९ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विभिन्न जिल्लामा थप १८९ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको जनाएको हो ।